काँक्रो खानुका यस्ता अपत्यारिला फाइदाहरु, थाहा पाउनु भयाे भने छक्क पर्नुहुनेछ ! – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काँक्रो खानुका यस्ता अपत्यारिला फाइदाहरु, थाहा पाउनु भयाे भने छक्क पर्नुहुनेछ ! काँक्रो बाह्रै महिना फल्ने एउटा फल हो । यो झालमा फल्ने गर्दछ । यो स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ । यसको सलाद बनाउदा पनि उतिकै चोपिलो हुन्छ ।
यसको टुक्राले आँखाको रातोपना र सुन्निएको घटाउँन सहयोग गर्छ। यसमा पाइने फाइबर र पानीले खाना पचाउँन सहयोग गर्छ।यसले खराब कोलेस्टेरोल पनि घटाउन मद्दत गर्छ । मुख र गिजालाई ताजा राख्न र गिजाका समस्या समाधान गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। काँक्रोमा पाइने सिलिका कपाल, नङ र छालाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । त्यसैले काँक्रो सौन्दर्यता बढाउँने खाद्यपदार्थ हो ।
Prevहरियो प्याजले निको पार्छ यस्ता रोगहरु, जसकाे बारेमा धेरैलाई थाहै नहुनसक्छ !
Nextयस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन !